अन्तरास्ट्रिय – List Khabar
Home / अन्तरास्ट्रिय
1 week ago अन्तरास्ट्रिय 0
काठमाण्डौ : मलेसियाले लक’डाउनको समय थप दुई साता बढाउने निर्णय गरेको छ । मलेसियाले जुन १५ देखि २८ सम्म लक’डाउनको समय लम्ब्या’उने निर्णय गरेको हो । मलेसियाले यसअघि जुन १४ सम्मको लागि लक’डाउनको समय तोकेको थियो । लक’डाउनको समय थप भएसंगै जुन १४ देखि थप दुई साता मलेसियामा लक’डाउन हुँदैछ …
2 weeks ago अन्तरास्ट्रिय 0
काठमाडौं : गै,रआवा,सीय नेपाली शेष घले र जमुना गुरुङद्वारा स्थापित एमआईटी ग्रुप फाउण्डेसनले नेपालका को`रोना संक्र`मितको उपचारका लागि थप तीन करोड रुपैयाँ बराबरको सामाग्री सहयोग गरेको छ । अष्ट्रेलियामा मुख्यालय रहेको फाउण्डेसनले नेपालका को`रोना संक्र`मितको उपचारका लागि २ सय २० थान अक्सिजन कन्स,न्ट्रे,ट,र ख,रिद गरी नेपाल सरकारलाई ह`स्ता´न्तरण गरेको हो …
साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरुका लागि आयो अत्यान्तै खुशीको खबर! साउदी अरबबाट कतार वा टर्की ट्रान्जिट मिलाएर नेपाली नागरिक स्वदेश फर्कन सक्ने भएका छन् । साउदी अबरस्थित नेपाली दूतावासले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत कतार वा टर्की ट्रान्जिट मिलाएर साउदी अरबबाट नेपाल जानसक्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको जानकारी गराएको छ । दूतावासका अनुसार साउदी …
अमेरिकामा तीन प्रकारका ‘समाजसेवी’ छन् । पहिलो: आफू सिन्को नभाँच्ने तर अरूले गरेको कामलाई आफूले नै गरे जस्तो गरेर दुनियाँलाई झुक्याईरहने। यो वर्गका सेवकहरू आसन र भाषणमा बढी निर्लिप्त हुन्छन्। यिनीहरू पद पाउन जुनसुकै हदसम्म पनि जान्छन्। यिनीहरूलाई लाग्छ कि सेवा गर्न पद नै चाहिन्छ। दोस्रो: सानो काम गर्ने तर …
3 weeks ago अन्तरास्ट्रिय 0
काठमाण्डौ चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नेपाललाई १० लाख डोज खोप निदे घोषणा गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगको कुरा’कानीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। चिनियाँ राजदूत हा उ यान्छीले राष्ट्रपति भण्डारीसँगको कुराकानीका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले १० ला’ख डोज खोप दिने घो’ष’णा गरेका हुन्। नेपालका लागि चिनि’याँ’ राजदूत …
नेपाललाई आगामी साता स्वास्थ्य सामग्री पठाउँछौं- डब्ल्यूएचओ
4 weeks ago अन्तरास्ट्रिय 0
काठमाडौं । कोरोना महामारीले देश अस्तव्यस्त बनेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओले नेपालीहरुका लागि केहि राहतको खबर सुनाएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण बढिरहेको कारण अहिले समस्यामा रहेका दक्षिण–पूर्वी एसियाली मुलुकहरुलाई ३४० मेट्रिक टनभन्दा धेरै स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरेको डब्ल्यूएचओले जनाएको छ । अबको केही सातामा नेपाल, भुटान, …
सिड्नी। अष्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयहरुले विदेशी विद्यार्थीहरुलाई अष्ट्रेलिया फर्किन दिनका लागि यहाँको सरकारलाई आग्रह गरेका बताइएको छ। कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यहाँका विश्वविद्यालयहरुमा भर्ना हुने विद्यार्थीको संख्या घट्दै गएको छ । महामारीका कारण विदेशी विद्यार्थीहरु पनि अष्ट्रेलिया फर्किन पाएका छैनन्। अष्ट्रेलियाले कोरोना भाइरसको पहिलो लहर शुरु भएदेखि नै अहिलेसम्म विदेशी विद्यार्थीहरुलाई फर्किन …
कोरोना अन्त्य बारे एका बिहानै WHO ले दियो यस्तो खुसिको खबर !
काठमाडौ । कोरोना म’हा’मा’रीले मानव जाति पी’डित र भ’य’भी’त भइरहेका बेला विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले पहिलोपटक आशा जगाउने कुरा गरेको छ । विश्वभर कोरोनाबाट झन्डै साढे ७ लाख मानिसको मृ’त्यु तथा दुई करोडभन्दा बढी संक्रमित भइसकेको भए पनि डब्लुएचओले यो म’हा’मा’री अ’न्त्य हुने आशा अझै बाँकी रहेको जनाएको हो …